माङ्सेबुङका पशुमा खोरेत, खुर र मुखमा घाऊ ! - माङ्सेबुङका पशुमा खोरेत, खुर र मुखमा घाऊ !
माङ्सेबुङका पशुमा खोरेत, खुर र मुखमा घाऊ !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २४ आश्विन, 02:59:24 PM
मङ्गलबारे । माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको गजुरमुखी र इभाङका पशुमा दुई हप्तादेखि खोरेत रोगको सङ्क्रमण देखापरेको छ । सो क्षेत्रका अधिकांश गाई, गोरू, बाच्छाबाच्छी र बाख्रामा खोरेत देखिएको हो ।
धेरैजसो पशुका खुर र मुखमा घाऊ भएको छ । रोग लागेपछि पशुले घाँस खान छाडेको, हिँड्न र उभिन नसकेर लड्न थालेको स्थानीयवासी मित्रप्रसाद न्यौपानले बताए । बाहिरबाट ल्याइएका राँगाबाट खोरेत सरेको पशुसेवा प्राविधिक कमल चौहानले बताए ।
गाउँ कार्यपालिकाले अहिले खोरेत नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेको छ । टोलीले गजुरमुखी र इभाङमा खोप लगाउने काम गरिरहेको छ ।
“खोरेत नियन्त्रण हुँदै गएको छ,” चौहानले भने । रोग देखिएपछि विराटनगरस्थित क्षेत्रीय प्रयोगशालामा पशुको रगत परीक्षण गरिएको थियो । परिक्षणका क्रममा खोरेत भएको पत्ता लागेको थियो । रोग फैलिन नदिन खोप लगाउने काम भइरहेको छ ।
२०७५, २४ आश्विन, 02:59:24 PM